ENGINEERING DRAWING ~ MSU Portal
နောက်လာမဲ့..Engineer Younger Generation ရဲ့..အရည်အသွေးကို..ကျစေနိုင်လို့..မြင်တာလေး...တင်ပြတာပါ..။
Marine Engineering Drawing ဟာ Mechanical Drawing တစ်မျိုးပါဘဲ..။
၁။ သဘောင်္ပေါ်မှာ..Drawing ဆွဲရတဲ့..အလုပ်လည်း..ရှိတာမှ..မဟုတ်တာ..
၃။ AutoCAD တောင်..ပေါ်နေတဲ့..ခေတ်ကြီးမှာ..လက်နဲ့ဆွဲခိုင်းနေတာ..ရူးနေလို့..
1. Pumps (Gear Pump, Centrifugal Pump, Reciprocating Pump, Variable
Stroke Delivery Pump)
(Numbers of pumps is 30 to 100 depend on Ship Size and Types)
2. Separator ( Heavy Oil Separator, Lub Oil Separator, Diesel Oil
(Numbers of separators is 1 to 6)
3. Air Compressor ( Main Air Compressor, Emergency Air Compressor,
Working Air Compressor)
(Numbers of air compressor is2to 8 depend on ship size and types)
အဲဒီစက်တွေကို..မောင်းရပါတယ်..ပြင်ရပါတယ်..။ သတ်မှတ်နာရီပြည့်ရင် အိုဗာဟော..လုပ်ရပါတယ်..။
Drawing ဖတ်တတ်ဘို့..ဆိုတာက..ကာတွန်းဖတ်သလိုမဟုတ်ပါဘူး..။ ခက်ပါတယ်..။
ဒါကြောင့်..Drawing ဆွဲခိုင်းတာပါ.လေ့ကျင့်ခိုင်းတာပါ...။ Drawing ကို..သေချာဆွဲမှ..လေ့ကျင့်မှ..Drawing Concept ကိုနားလည်ပြီး.. သူမျာဆွဲထားတာကို..ဖတ်နိုင်ပါတယ်..။
Drawing ကောင်းကောင်း..မဖတ်တတ်သူ.မြန်မာ.ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာအရေအတွက်.. ဟာ..ညှာညှာ..တာတာ..ပြောရရင်..၇၀% လောက်ရှိပါမယ်..။
အဲဒီတော့..စက်တွေ..ဖြုတ်တိုင်း..ပြင်တိုင်း..၊ ထင်ရာလျှောက်လုပ်လို့..၊ အပျက်အစီးတွေများပါတယ်..။
သဘောင်္ပေါ်မှာ..Drawing မဆွဲရပါဘူး..။ ဒါပေမဲ့..Drawing ကောင်းကောင်းဖတ်တတ်ဘို့..လိုပါတယ်..။ ဖတ်တတ်ဘို့..ဆိုတာက..အသိနဲ့..ဆွဲခဲ့..လေ့ကျင့်ခဲ့ဘို့..လိုပါတယ်..။ ပုံတူအောင်..ကူးချဘူးယုံနဲ့..မရပါဘူး..။
သဘောင်္ပေါ်မှာ..စက်အစိတ်အပိုင်းတွေ..ပျက်စီးတဲ့..အခါ..Spare မှာရပါတယ်..။ Original ပေးတဲ့..ကုမ္ပဏီဆိုရင်တော့..သူ့နံပါတ်နဲ့မှာယုံပါဘဲ..။
ဒါပေမဲ့...ဒီနေ့ခေတ်မှာ..Original Spare မှာပေးတဲ့..ကုမ္ပဏီက..၁၀% လောက်ဘဲရှိပါတော့တယ်..။
ဒါကြောင့်..ရေကြောင်း..အင်ဂျင်နီယာမှာ..Engineering Drawing ကိုအလေးအနက်ထား..သင်ကြားသင့်ပါတယ်..။
Auto CAD ဆိုတာ..လာမပြောပါနဲ့..။ လက်တွေ့..မဆန်ပါဘူး..။
သဘောင်္ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ..Auto CAD ဆော့ဖ်ဝဲလ်..တင်မထားပါဘူး..။
လုပ်လို့..မသင့်ပါဘူး..။ 3E လက်မှတ်ကြီးပြပြီး..3E လစာစားပြီးရင်..။ 3E နဲ့ဆိုင်တဲ့..အလုပ်ကို..လုပ်ရမှာ.ကိုယ့်တာဝန်ပါ..။ Professional အလုပ်ပါ..။
Posted in: guide,knowledge,literature,ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ